Adebayo Akinfenwa” Sergio Ramos aad ayuu u Nasiib badanyahay waayo kama aanan Hor imaan Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Adebayo Akinfenwa” Sergio Ramos aad ayuu u Nasiib badanyahay waayo kama aanan Hor imaan Sabab?
(09-06-2018) Ninka Xoog weynaha ah ee u dhashay dalka England Adebayo Akinfenwa ayaa Hanjabaad u diray daaafaca kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos kaas oo uu ku tilmaamay in uu yahay mid Nasiib badan maadaama aysan iskaga hor imaan Cayaar Kubada Cagta ah.
Adebayo Akinfenwa oo ah 36 Sano jir u dhashay dalka England isla Markaana ah Weeraryahan Kubada Cayaara ayaa ka caroodey dhibaatadii uu Sergio Ramos u geystey Cayaartoyda kooxda Liverpool ee kala ah Mohamed Salah iyo Loris Karius kuwaas oo uu midna Garoonka ka saaray midna maskixiyan qal qal geliyey.
Weeraryahanka Adebayo Akinfenwa ayaa yiri aad ayaan uga xumahay in aanan ka hor imaan Sergio Ramos isagu waa Nin Nasiib badan Xaqiiqdii waxaanan aad uga xumaaday sida uu yeelay kooxdii aan ku soo bar baaray yaraanteydii ee Liverpool Finalkii Champions League mana dhacdeen in aan Garoonka uga baxo ee isaga ayaan kasaari lahaa ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyey Adebayo Akinfenwa oo ah Nin ay ka baqaan daafacyada ka horyimaada.